Hollora | Oromia Shall be Free
Tag Archives: Hollora
Obboleewwan lama turan kan dukkana isaanii keessatti ibiddi itti lakkifame. Tokko lubbuun isaa dabrite, inni lammaffaa hospitaala jira.
April 13, 2015	Comments Off on Obboleewwan lama turan kan dukkana isaanii keessatti ibiddi itti lakkifame. Tokko lubbuun isaa dabrite, inni lammaffaa hospitaala jira.
Hookkarri lammiilee biyyoota Afrikaa biroo kanniin Afrikaa Kibaa keessa jiraatan irratti xiyyeeffate torbaan kana keessa babal’achuu isaati kan gabaafame. Lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiraatan kanniin …